के तपाई दिर्घाउ रहन चाहनुहुन्छ ? दिर्घायु रहन यस्ता खानेकुरा खान एकदमै जरुरी छ - ज्ञानविज्ञान
आजकल बजारमा सुपरफुड नामले केही खानेकुरा प्रचलित बन्दै आएको हामीले सुनेका छौँ ।पोषणविद्हरुका अनुसार सुपरफुडको नाममा दुई चार वटा खानेकुरा खाएर स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुन सकिँदैन, यसका लागि मात्रा मिलाएर पौष्टिक आहारा खानैपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
यति भन्दाभन्दै पनि केही खानेकुराहरुमा पोषण बढी हुने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न । अनुसन्धानले देखाएअनुसार ती खानेकुराहरुमा केही रोग विरुद्ध लड्न सक्ने र हाम्रो आयु बढाउन सक्ने क्षमता हुन्छ । सुखी, स्वस्थ र लामो जीवनका लागि खान सकिने केही खानेकुराहरु यसप्रकार छन् ।
हरियो भटमासलाई विशेष गरी एसियाली मुलुकहरुमा अत्यधिक रुचाइन्छ । उसिनेर, तरकारी पकाएर, सुप बनाएर वा टुसा उमारेर पनि खान सकिने हरियो भटमासलाई धेरै तरिकाले पकाएर खाने चलन छ । भटमासमा आइसोफ्ल्याभोन नामक तत्व पाइन्छ जसले घाउ वा चोटपटक, शरीरमा पाइने विषादी, क्यान्सर तथा अन्य जिवाणुविरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ ।
यसले शरीरमा चोटपटक लाग्न वा सुन्निन दिँदैन, कोषहरुको उमेर लम्ब्याउने र क्यान्सरविरुद्ध लड्न पनि सहयोग गर्दछ । अनुसन्धानका अनुसार जीवनभर भटमासलाई हामीले खाने खानेकुराको अंश बनाउन सके स्तन क्यान्सरको जोखिमबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
हेर्दा पनिरैजस्तो देखिने भटमासबाट बनेको तोफुले हाम्रो शरीरलाई एकदम नै फाइदा गर्दछ । भटमासमा पाइने तत्व नै यसमा पनि पाइने भएकाले यो पनि स्वास्थ्यवद्र्धक छ । एसियाली मुलुकहरुमा प्रचलित तोफुलाई तेलमा फु¥याएर, उमालेर वा यसै पकाएर पनि खान सकिन्छ ।
भटमासबाटै बन्ने भएकाले यसमा पनि आइसोफ्ल्याभोन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ जसको व्याख्या यसअघि नै गरिसकिएको छ । यसका साथै यसमा प्रोटिन, क्यालसियम, आइरन, सेलेनियम, फोस्फोरस, म्याग्नेसियम, जिंक, कप्पर र हाम्रो हड्डी र दाँत बलियो र स्वस्थ बनाउन चाहिने खनिज पनि पाइन्छ । केही पोषणविद्हरुका अनुसार तोफु खाएपछि लामो समयसम्म टन्न भएको महसुस गराउने भएकाले धेरै खाने बानी भएकाहरुले तोफु खादाँ खाना कम गर्न सक्ने बताउँछन् ।
गाजरमा हुने बेटा क्यारोटिनले यो सुन्तला रंगको हुन्छ । यो तत्वलाई हाम्रो शरीरले भिटामिन ए मा बदल्छ । न्यासनल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थका अनुसार हाम्रो शरीरले भिटामिन ए उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामीले खाने खानेकुराबाट नै शरीरले भिटामिन ए प्राप्त गर्दछ । बेटा क्यारोटिनले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, दृष्टि, प्रजनन तथा कोषिय सञ्चारको अभिवृद्धि गर्दछ ।
यही तत्वले नै शरीरको विषादी हटाउँदै कोषलाई जीवित रहन र यौनावस्था वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ । बढ्दो उमेरका कारण गुम्दै जाने दृष्टिको रक्षा गर्न पनि यसले सहयोग गर्दछ । गाजरलाई सकेसम्म काँचो खाँदा नै यसले बढी फाइदा गर्छ तर यसको पोषण खेर नजाने गरी पकाएर खाँदा पनि यो फाइदाजनक नै हुन्छ ।
हामीले खानैपर्ने खानेकुराहरुमा हरिया तरकारीहरु जस्तैः बन्दा, ब्रोकाउली, सिमी, काउली, मूला, आदिजस्ता तरकारीहरु पनि पर्दछन् । यी तरकारीहरुमा भिटामिन सी, भिटामिन ई, भिटामिन के, खनिज, पोटासियम, क्यालसियम, सेलेनियम, आदि तत्वहरु पाइन्छन् ।
बन्दा, गोभीका यस्ता तरकारीहरुमा पाइने ग्लुकोजिनोलेट्स्ले शरीरलाई धेरै फाइदा गर्दछ । यति मात्र होइन, यस्ता तरकारीले दिमाग र मुटु स्वस्थ राख्दछ भने यसले क्यान्सर समेत रोक्न सक्ने अड्कलको अनुसन्धान भइरहेको छ । साथै यसमा पाइने फाइबरले रगतमा चिनीको मात्रालाई सन्तुलनमा राख्दै, तौल बढ्न दिँदैन र लामो आयुसम्म पनि स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
साइट्रस फलफुल भन्नाले सुन्तला, अंगुर, कागती, निबुवा, आदिजस्ता फलपूmलहरुलाई बुझाउँछ । यो हाम्रो खानेकुरामा नभई नहुनेमध्येको खाना हो । यस्ता फलपूmलहरु हामीलाई लामो समयदेखि पोषणविद्का साथै हाम्रा हजुरआमाले पनि खान सुझाउनुहुन्छ । यसमा पाइने भिटामिन सीले शरीरको विषादी फाल्ने र घाउ, चोटपटक तथा संक्रमणबाट जोगाउने काम गर्दछ ।
यसबाहेक यी फलपूmलहरुमा फाइबर, पोटासियम, क्यालसियम, थाएमिन, भिटामिन बि सिक्स, फोसफरस, म्यागनेसियम, कपर, आदिजस्ता तत्वहरु पनि पाइन्छन् । साइट्रस फलपूmलमा भएका तत्वहरुले क्यान्सर, मुटु तथा नशासम्बन्धि रोगविरुद्ध लड्न सहयोग गर्दछ ।
यहाँ प्रस्तुत सबै खानेकुराले हामीलाई स्वस्थ रहन सहयोग गर्नुका साथै निरोगी र यौवनको आयु बढाउन सहयोग गर्दछ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार हाम्रो वंशाणुगत विशेषता फरक परेसँगै हाम्रो शरीरलाई चाहिन खानेकुराहरु पनि फरक पर्दछन् । यसकारण खानेकुराहरु खाँदा आफुलाई के बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गेडागुडीमा फाइबर, म्याग्नेसियम तथा पोटासियम प्रशस्तै पाइन्छ, र सबैले तपाईँको रक्तचापलाई स्वस्थ तरिकाले नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। दिनमा कम्तीमा पनि १ कप गेडागुडी पानीमा भिजाएर खानाले, शरीरको रक्तचाप महत्वपूर्णरूपले नियन्त्रणमा आउँदछ। यसले कम रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूलाई पनि कुनै किसिमको हानी पुर्याउँदैन।
२. कालो चिया
कालो चियाको बारेमा योभन्दा पहिलेका अङ्कहरूमा पनि विशेष जानकारी उल्लेख गरिसकेका छौँ (पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)। कालो चियामा पाइने तत्वले मुटुको धमनीमा भएको बाधालाई पनि सहजता प्रदान गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा रक्तचापमा प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण हुने गर्दछ। तर दिनमा ६ कपभन्दा बढी कालो चिया नपिउनुहोस्।
३. केरा र स्याउ
भनिन्छ, केरा र स्याउ भनेको फलफूलहरूको राजा हो। केरा भनेको पोटासियमको महान श्रोत हो, जसले रक्तचापको असरलाई कम गर्दछ। “दिनमा एउटा स्याउ खानुहोस्, डाक्टरलाई धपाउनुहोस्!” भन्ने भनाइ पनि सुन्नुभएकै छ होला। त्यसैले प्रतिदिन कम्तीमा पनि एउटा स्याउ र ४ कोसा केरा खानाले रक्तचापमा नियन्त्रण हुने मात्र नभएर शरीरलाई स्वस्थ अनि दाँतलाई पनि सफा राख्न मद्दत गर्दछ।
४. कम चिल्लो भएको दूध अथवा दही
जसले, दैनिक कम चिल्लो भएको दूधबाट बनेको परिकार अथवा दही खान्छ (जसमा क्याल्सियम र भिटामिन डि पाइन्छ), उसको शरीरको रक्तचाप ११ प्रतिशतले घटेको एक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। त्यसैले, बिहान उठ्ने बित्तीकै १ गिलास मनतातो दूध पिउनुहोस्, खानासँग १ गिलास दही मिलाउनुहोस्, अथवा दिनभरीमा कम्तीमा पनि ३०० मिलिलिटर कम चिल्लो भएको दूध पिउनुहोस् र मुटु रोग, उच्च रक्तचाप जस्ता घातक रोगहरूबाट मुक्त हुनुहोस्।
हुन त, आलु भनेको नेपालमा मात्रै नभएर अधिकांश देशभरी नै सर्वाधिक पाइने र सर्वाधिक सेवन गरिने खाध्यपदार्थ हो। यसमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट जस्ता पौष्टिक तत्वहरू पाइन्छन् भने पोटासियम, म्याग्नेसियम जस्ता खनिज पदार्थहरू पनि पाइन्छन्। दैनिक आलुको सेवनले शरीरमा अन्य रोगहरूको साथै रक्तचापको समस्यामा पनि कमी हुँदै जान्छ।
धेरैले गर्ने एउटै गल्ती भनेको आलु बोक्रा तासेर पकाउने गर्छन्, तर त्यसो गर्नु ठिक होइन किनभने, अधिकांश मात्रामा प्रोटिन र अन्य पौष्टिक तत्वहरू बोक्रामा नै पाइन्छन्, त्यसको मतलब भित्री भागमा पाइँदैन भन्न खोजिएको होइन। तर बोक्रा र भित्रको फललाई समग्रमा खाँदा झन् बढी फाइदा हुने गर्दछ। ध्यान दिनुपर्ने कुरामध्ये, आलुको बोक्रालाई राम्रोसँग सफा गरेर खानु पनि एक हो।
उच्च रक्तचाप होस् या मधुमेह, कम रक्तचाप होस् या अन्य कुनै रोगहरू, तपाईँ आफैले घरमै बसीबसी त्यसको नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति पनि हेलचेक्र्याईँ गर्नुभयो भने, स्वयम् तपाईँलाई नै बेफाइदा हुने गर्दछ। स्वस्थ रहनुहोस्।
Don't Miss it पानीमा नून हालेर नुहाउनुस्, अनेकौं रोग भगाउनुस्
Up Next कसरी हुन्छ हृदयघात ? हृदयघातबाट बच्न कुन तेल खाने ? थाहापाउनुहोस्
​बच्चाहरुको हाइट बढाउन यस्ता खानेकुरा खुवाउनुस
बच्चाको सम्पूर्ण विकासका लागि अण्डामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन, भिटामिन बी, बी२, रिबोफ्लाबिन आदि जरुरी तत्व हुन्छ । जसको नियमित सेवनले…
कुन समयमा पानी नपिउने ?
कति बेला पानि पिउने ? हामीलाई थाहा नहुन सक्छ धेरै पानि पिउनाले पनि शरीरमा रहेका सोडियम, पोटासियमलगायत उपयोगी पदार्थ पिसाबमार्फत बढी…